DA-2 A3-Standard configuration 1.Split Side Rails: 4pcs PP ဘေးထွက်ရထားများသည်လူနာအားရေတံခွန်များမှအကာအကွယ်ပေးသည်။ 2.Removable Mattress Platform: လွယ်ကူစွာဖြုတ်။ ရလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ မွေ့ရာပလက်ဖောင်းသည်နောက်ကျောဘုတ်အတွက် X-Ray ပြုလုပ်နိုင်ပြီးလူနာ၏ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်သည်။ 3.H / F ဘုတ်များသော့ခလောက် - အိပ်ရာဘုတ်သည်သော့ခတ်သည်အိပ်ရာကိုစတီယာရင်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်သည့်အခါအိပ်ရာဘုတ်များကိုမတော်တဆဖယ်ရှားခြင်းမှကာကွယ်သည်။ 4. အကာအကွယ်ထောင့်ဘမ် 5. တိုင်ဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြုတ်ရည်ကိုမတ်တပ်ရပ်အပေါက် 6.Mattress ကိုင်ဆောင်သူ ...
DA-2 A2-Standard configuration 1.Split Side Rails: 4pcs PP ဘေးထွက်ရထားများသည်လူနာအားရေတံခွန်များမှအကာအကွယ်ပေးသည်။ 2.Removable Mattress Platform: လွယ်ကူစွာဖြုတ်။ ရလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ မွေ့ရာပလက်ဖောင်းသည်နောက်ကျောဘုတ်အတွက် X-Ray ပြုလုပ်နိုင်ပြီးလူနာ၏ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်သည်။ 3.H / F ဘုတ်များသော့ခလောက် - အိပ်ရာဘုတ်သည်သော့ခတ်သည်အိပ်ရာကိုစတီယာရင်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်သည့်အခါအိပ်ရာဘုတ်များကိုမတော်တဆဖယ်ရှားခြင်းမှကာကွယ်သည်။ 4. အကာအကွယ်ထောင့်ဘမ် 5. တိုင်ဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြုတ်ရည်ကိုမတ်တပ်ရပ်အပေါက် 6.Mattress ကိုင်ဆောင်သူ ...
DA-2 A1-Standard configuration 1.Split Side Rails: 4pcs HDPE ဘေးထွက်ရထားများသည်လူနာအားရေတံခွန်မှကာကွယ်မှုပေးသည်။ 2.Removable Mattress Platform: လွယ်ကူစွာဖြုတ်။ ရလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ မွေ့ရာပလက်ဖောင်းသည်နောက်ကျောဘုတ်အတွက် X-Ray ပြုလုပ်နိုင်ပြီးလူနာ၏ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်သည်။ 3.H / F ဘုတ်များသော့ခလောက် - အိပ်ရာဘုတ်သည်သော့ခတ်သည်အိပ်ရာကိုစတီယာရင်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်သည့်အခါအိပ်ရာဘုတ်များကိုမတော်တဆဖယ်ရှားခြင်းမှကာကွယ်သည်။ 4. အကာအကွယ်ထောင့်ဘန် 5. တိုင်များပြုတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ပြုတ်ရည်ကိုမတ်တပ်ရပ်တွင်း 6.Mattress Holde ...